"Wish upon" အတွက် Trailer Sweet Teenage Revenge - iHorror ကိုပြသသည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း "Wish upon" အတွက် Trailer ချိုမြိန်ဆယ်ကျော်သက်လက်စားချေပြသသည်
"Wish upon" အတွက် Trailer ချိုမြိန်ဆယ်ကျော်သက်လက်စားချေပြသသည်
by ကယ်လီ McNeely ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2017
ကရေးသား ကယ်လီ McNeely ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2017
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်၎င်းသည်စုပ်ယူထားသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသဘောပေါက်နိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဝိသေသလက္ခဏာပြcrisisနာကိုရင်ဆိုင်နေကြရပြီးရွယ်တူချင်းဖိအားသည်လုံး ၀ မြည်းနေသောနာကျင်မှုဖြစ်သည်။ သင်ဟာစုစုပေါင်းလွတ်လပ်မှုအတွက်ငယ်လွန်းသော်လည်းသင်လုပ်သောမကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များမှလွတ်ကင်းရန်အသက်ကြီးလွန်းသည်။ အခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ဆန္ဒခုနစ်ခုပေးတဲ့မှော်အတတ်ကိုသင်ထိမိလဲလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာဖြစ်နိုင်သည်မှားသွားနိုင်မည်နည်း ကောင်းပြီ, များအတွက်အသစ်ကနောက်တွဲယာဉ်သည်နှင့်အညီ အပေါ်သို့ Wishအများကြီး။ အများကြီးမှားသွားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲမဆိုမြင်ကြလျှင် မင်္ဂလာပါ စီးရီး, သင်သဘာဝလွန်ထိတ်လန့်ဆန္ဒစက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုငါသိ၏။ မိန်းကလေးငယ်သည်ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်သည်၊ ဆန္ဒကိုခွင့်ပြုသည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကဂယက်ရိုက်မှုကြောင့်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရသည်။ အတွက်ပျော်စရာလှည့်ကွက် အပေါ်သို့ Wish ငါတို့ရဲ့ဇတ်ကောင်တွေဟာဆိုးဝါးတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့မရပ်ချင်ဘူးဆိုတာပဲ။
ပုံရိပ်အကြွေး: Broad အစိမ်းရောင်ရုပ်ပုံများ
တနည်းကား, ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခြင်းခက်ခဲသည်, သို့သော် မိန်းကလေး။ ရပ်ပါ သင်မှာ .... ရှိသည် ခုနှစ် ချစ်တယ် ဒါအများကြီးမှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူမအခိုင်အမာဆိုသော်လည်း“ အရာအားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မည်” ဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇတ်လိုက်တွေအတွက်အဆင်ပြေနေပုံရပေမဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ“ ပုပ်ပျက်ခြင်း” လိုပဲသူမရဲ့အသားအရေကိုအလျင်အမြန်ပုပ်နေလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အရာနှင့်ဆင်တူသည့်အမှိုက်ပုံတစ်ခုအတွင်းအမှိုက်သရိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ကံဆိုးစွာကြုံတွေ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးနေရာ.
ဒီဟာကပျော်စရာကောင်းပုံရတယ်၊ အထူးသဖြင့်မင်းဟာချိုမြိန်တဲ့၊ သူမ၏အရေပြားပျက်စီးခြင်းကိုလိုချင်ခြင်းထက်သူမ၏ကားထဲတွင်နီးပါးပြေးနေသောယုတ်မာသောမိန်းကလေးနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်း။
အပေါ်သို့ Wish John R. Leonetti မှညွှန်ကြားသည်။Annabelle) နှင့်ဘာဘရာမာရှယ်ကရေးသားခဲ့သည် (ဗိုင်းရပ်စ်) ။ ဂျိုဂျီကင်း (အဆိုပါ ConjuringSherilyn Fenn နှင့်အတူကြယ်ပွင့် (အမွှာ Peak) နှင့် Ryan Phillippe (ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာမင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကြမ်းတမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေငါသိတယ်) ။ ကြည့်ရှုလော့။ Shannon Purser (မှချစ်သူလေး လူစိမ်းအရာ) ပြန်လာပြီ
အပေါ်သို့ Wish အောက်တိုဘာနောက်တွဲယာဉ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်မှော်သတ်ဖြတ်မှုကိုစိတ်လိုကိုယ်လျောက်တွေးတောနေပါက၊ Wishmaster Franchise ၏ Blu-Ray Box Set ထုတ်လုပ်မှု.
မကြာမှီလာမည်joey ရှငျဘုရငျအဆိုပါ conjuringနောကျတှဲရထားအပေါ်ယံမင်္ဂလာပါ
Kelly McNeely သည်လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးခြင်း၊ လက်မှုပညာလုပ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစွဲလမ်းမှုရှိသည့်တောခုတ်ဓားဖြင့်ကိုင်တွယ်သော machete ဖြစ်သည်။ သူမက Grim Magazine, Modern Horrors, CGMagazine, Salem Horror Fest, 90 Elm နှင့် Netflix Life တို့ကိုလည်းကူညီခဲ့သည်။ သူမသည် Facebook ရှိ The Creepy Crafter တွင်ပွဲလမ်းသဘင်ပစ္စည်းများပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ် Twitter နှင့် Instagram @kellsmcnells မှသူမ၏နောက်သို့လိုက်နိုင်သည်။
ဤ Serial Killer Valentine Card ကိုဤ Valentine Day ကိုသတ်!
Syfy သည်3နှင့်4အတွက်သုည Channel ကိုသက်တမ်းတိုးသည်